Gudoomiyana xisbiga Wadani oo faah faahiyay weerar lagu qaaday Gurigiisa. | Arrimaha Bulshada
Home English News News Gudoomiyana xisbiga Wadani oo faah faahiyay weerar lagu qaaday Gurigiisa.
Gudoomiyana xisbiga Wadani oo faah faahiyay weerar lagu qaaday Gurigiisa.
Bulsha:- Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Xirsi Xaaji Xassan ayaa sheegay in gurigiisa la soo weeraray, isaga oo weerarkan oo loo adeegsaday gaari uu ku eedeeyay wasiirka gaashaandhigga Somaliland.
Gudoomiyaha oo Suxufiyiinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu ka badbaaday sbirqoolkan, maadaama sida uu hadalka u dhigay uu ka maqnaa hoyga xiliga weerarkan qorsheysa lagu soo qaadayay, waxa uu tilmaamay iney noqoneyso markii 3aad oo uu fashilmo isku day lala damacsanaa in lagu khaarijiyo ama la cabsi galiyo hoggaanka xisbigooda.
Dhinaca kalena, Wasiirka Gaashaandhigga Somaliland Cabdi qani Maxamuud (Caateeye) ayaa eeddan jawaab ka bixiyay, isaga oo iska difaacay eedaha kaga yimid Guddoomiyaha Xisbiga Wadani oo uu ki sheegay iney yihiin kuwo la buun buuniyay.
Waxa uu sheegay inaanu jirin qorshe lagu talagalay oo lagu weeraray hoyga gudoomiyaha Xisbiga Wadani Xirsi Xaaji Xassan, isagoo qiray jiritaanka dhacdadan balse waxa uu tilmaamay iney ku timid qadar dhanka Alle ah oo aan eheyn qorshe la sii diyaariyay.
Xukuumada Muuse Biixi iyo axsaabta mucaaaradka ah ee Wadani iyo UCID ayaa waxaa u dhexeeya khilaaf cirka isku sii shareeray, iyadoo uu salka ku hayo qabashada doorashada madaxweyne oo loo balansan yahah bisha November, walow xukuumadda lagu eedeynayo iney wado dib u dhac hareeya mudada doorashada.